Tohano ny Global Voices: Ampio ho lasa toerana mifandrohy bebe kokoa izao tontolo izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2010 16:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, ភាសាខ្មែរ, عربي, srpski, English
Raha nanomboka ny Global Voices izahay taona enina lasa izay, tokana no tanjonay: ny hanolotra ho an'ireo mpamaky anay ny fahafahana miditra amin'ilay tontolo midadasika nifankahitanay teo anivon'ny aterineto. Ny famakiana bilaogy avy amin'ny faritra eran'izao tontolo izao dia nanome anay fomba fijery izay tsy azonay teo aloha avy tamin'ny gazety an-tsoratra, fampielezam-peo na fahitalavitra: ny feon'ireo olona tsotra mampiasa ny teknolojia mba hizaràn-dry zareo ny fomba fijeriny, ny foto-keviny ary ny fahitàn-dry zareo ireo zava-dehibe sy ny madinika koa ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo. Dia nanangana tsotra fotsiny ny vohikala – Global Voices Online izahay.
Taona enina aty aoriana, nitombo ilay vohikala tsotra natsanganay ka lasa loharano tena ilaina ho an'ny rehetra izay maniry hahafantatra hoe inona izao no resahan'ny olona sy eritreretin'ny olona avy any Cameroon hatrany Cambodia. Asa am-pitiavana vokarin'olona 400 manerana izao tontolo izao, izay mahita ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra amin'ny endriny rehetra – videos, saripika, podcasts, hafatra amin'ny Twitter, fanavaozan-tatitra Facebook updates, bilapogy – ho toy ny fitaovana mahery vaika ho enti-manorina fifandrohizana / fifandraizana mamakivaky ny sakan'ny teny, kolotsaina ary firenena.
Amin'ny maha-mpikambana mpiara-mitantana ny Global Voices Online azy, tsy ela izay no nametrahan'i Rosental Alves azy io ho ao anatin'ny vanim-potoan'ny fahaterahan'ny Aterineto niatrehan'ny mponina eran'izao tontolo izao ny tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao: “tany efitry ny fampahalalam-baovao.” Ankehitriny isika rehetra dia miady amin'ny fitobahana tafahoatran'ny vaovao: “ala mikitroky ny fampahalalam-baovao.” Ny fanamby hanangana sivilizasiona any an-tany efitra dia zavatra tena samihafa amin'ny fananganana sivilizasiona anaty ala mikitroka. Iray ao anatin'ny maro i Global Voices – ary inoanay, fa tena antom-pisiany ireo ezaka tsy mitady tombom-barotra miainga avy any ifotony izay miasa mafy tokoa hanangana sivilizasion ao anatin'ny ala mikitroky ny fampahalalam-baovao manerantany vaovao sy mivoatra haingana be mifototra amin'ny soatoavin'ny fahalalàhana maneho hevitra, fisokafana sy fahaizana mifanaja. Raha nisy zavatra kely takatray nandritra ireo taona vitsy lasa, dia satria fotsiny nisy ny Aterineto, ary satria ny tsirairay izao dia samy afaka mamorona media, izay tsy midika avy hatrany fa hoe hiova ho demaokratika sy handry fahalemana kokoa izao tontolo izao.
Na dia maro amintsika aza no mpampiasa mavitrika ireo tolotra samihafa avy amin'ny Google, Facebook sy Twitter, tsy inoanay mihitsy hoe ny Aterineto mitodika amin'ny ara-barotra monja dia afaka hamaly ny filàna rehetra sy hiaro ny zon'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao. Isika – mponina manerana ny tontolo ary mino ny zontsika ho afa-manangana media tsy miankina aty anaty aterineto – dia mila mamondrona ny hery mba hanangana rafitra sy tontolo afaka mamatsy sy mikarakara ny karazana tontolo iriantsika honenana. Vondron'olona miasa toy ireny hoe tena vahoaka iray ireny mihitsy ny Global Voices – fa tsy “mpampiasa aterineto” manjifa fotsiny – ary mandray andraikitra manokana ho an'ny hoavin'ny fiarahamonintsika.
Ny ankabeazan'ireo olona mitankosina miaraka amin'ny Global Voices dia miasa an-tsitrapo, toa anay mianadahy. Ny olona enina, miasa efa mila ho amin'ny ora feno ho an'ny tetikasa, ary 20-mahery izay mandray famporisihana kely mifanaraka amina ampaham-potoana, dia tsy azo heverina mihitsy hahangon-karena avy amin'ny asa atao. Ny tsirairay miasa ho an'ny Global Voices dia atosiky ny fitiavany ny zavatra atao: mba hanasongadinana ireo feo izay mazàna tsy re ivelan'ny fiarahamonina iainan'izy ireo, mba hiarovana ny fahalalahana miteny eo amin'ny aterineto, mba hanangànana fifandraisana / fifandrohizana eo amin'ireo olona rehetra manerantany.
Na eo aza ny fanohanana maro avy amin'ireo mpanolo-tena entanim-pitiavana, mila fanohanana ara-bola ihany izahay mba hampiodinana sy hampiroboroboana ity tetikasa ity. Nanjary taninketsa ho ana tetikasa goavana sy mitondra fivoarana nanerana ny tany ny Global Voices. Rehefa manome fanampiana ianao, tsy hoe manohana fotsiny ireo vohikala 20 efa novokarinay (amina tenim-pirenena 17 !) – fa manosika anay koa ianao hahatanteraka ny fanohanana ireo tetikasam-pampivoarana sy fanandràmana mba hahazoana antoka fa ny tetikasanay dia ho afaka hitohy hiara-dàlana amin'ny fiovàna mihazakazaka, tsy mitsahatry ny aterineto azo entina mandehandeha.
Raha inoanao fa zava-dehibe ny zavatra ataonay ato amin'ny Global Voices mba hahatonga ny tontolo ho toerana iray midadasika be sy mifandrohy bebe kokoa, dia manantena izahay fa hanohana anay ianao amin'ny fanolorana fanomezana.
Miaraka amin'ny fisaorana mitafotafo sy ny firarian-tsoa avy aminay,
Rebecca MacKinnon sy Ethan Zuckerman
Mpiara-mamorona ny Global Voices